Welcome to Taungoo Blog: April 2008
သင်္ကြန်တွင်းမှာ ဘလော့ဂါများပျောက်လို့နေပါတယ်... ဒီတော့ ပို့စ်တွေလည်း အနည်းငယ်ရပ်တန့်လို့နေသည်ပေါ့.. အဲ့ဒီအချိန်အတွင်းမှာပဲ ကော်နက်ရှင်တွေ သိသိသာသာလေးနေလို့ ကျနော်လည်း ဘာမှပြင်ဆင်တည်းဖြတ်နိုင်ခြင်း မရှိခဲ့မိဘူး...
အခု (ဒီည) မှာတော့ နည်းနည်းပါးပါးတည်းဖြတ်ရင်ကောင်းမလားဆိုပြီး ချက်တင်ထိုင် (အဲလေ) ဆက်တင်တွေ ထိုင်ပြောင်းနေတာ.. အဆင်သိပ်မချောသေးတော့ ပြောရခက်တယ်...
ဒီဇိုင်းချိန်းပြီးတော့ကို အရောက်လာခဲ့မှာ... :)
posted from itmen.blogspot.com
Firefox အတွက် proxy add on လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ Site တွေကို ကျော်ဖို့သုံးနိုင်ပါတယ်။ ကျော်တာ မြန်တယ်ဗျာ။ http://zawthureintun.googlepages.com/phproxy_-_inbasic-3.0.2b-fx.xpi ကနေ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။ download ပြီးရင် အဲဒီဖိုင်လေးပေါ်မှာ Right Click နှိပ် Open With ကိုရွေး၊ SelectaProgram From
a list ကိုရွေး၊ OK နှိပ်ပါ။ ပြီးရင် Firefox ကိုရွေး၊ OK နှိပ်ပါ။ Open With မှာမတွေ့ခဲ့ရင် Properties ထဲမှာ Change ဆို
ပြီး Firefox ကိုပြောင်းပေးလိုက်ပါ၊ Firefox ပွင့်လာပြီး Install လုပ်မှာလား မေးတဲ့အခါကျရင် Install Now ကိုနှိပ်ပါ။
ပြီးရင် Firefox ကို restart လုပ်ပါ။ အဲဒီအခါမှာ firefox screen ရဲ့ ညာဘက်အောက်မှာ အပြာရောင် P ပုံလေးပေါ်လာပါ လိမ့်မယ်။ ပိတ်ထားတဲ့ site တစ်ခုခုကို သွားလိုက်ပါ။ Access Denied ပေါ်လာလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါကျရင် အဲဒီ အပြာရောင် P လေးကိုသာ နှိပ်ပြီး ခဏစောင့်လိုက်ပါ။ ပိတ်ထားတဲ့ site ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်။
ရွှေတောင်ငူက ကိုကို၊မမ၊ညီငယ်၊ညီမငယ် တို့ရေ....
ရောက်လာတော့မဲ့ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီးမှာ မူးရူးကခုန်ကြရင်း (စောထီးဗျာ စောထီး...နတ်ရှင်နောင် တစ်ယောက်ထဲကိုပြောတာနော်)
ငြီမ်းချမ်းစွာနဲ့ ပျော်ရွှင်နိုင် ကြပြီး စိတ်ကူးအိပ်မက်လေးတွေ အကောင် အထည်ဖေါ်နိုင် ကြပါစေ လို့
(အကောင်ပေါ်ရင်တော့ သေချာတာက ဟုတ်ဝမ် လား ကေတုလားပေါ့) ဆုတောင်းရင်း
HAPPY NEW YEAR လို့ ကြိုတင်နှုတ်ဆက်လိုက်ရပါကြောင်း ........
ညီမလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီရာလေးတွေပါ ... ... ...
အာဒမ်ခေတ်က ပန်းသီးတစ်လုံး ... ... ...
အရာရာမှာ ကျွန်တော်က အလွယ်တကူပျော်ဝင်ပြီးသားပဲ ... ... ...
ညီမလေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကြား နှုတ်ခမ်းနီရာလေးတွေက
ပေါင်းကူးတံတားလေး ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့ ... ... ...
အချစ်တစ်ခုကို ခေါင်းစဉ်တစ်ခုစီတပ်နေတဲ့အရွယ် ...
အရှုံးကို ခပ်တင်းတင်းမော့ကြည့်ရဲတဲ့အရွယ် ...
အရာရာကို ပုံအောရမှာကိုတော့ တွန့်ဆုတ်တက်တဲ့အရွယ် ...
မကျေနပ်ချက်တွေကိုစု ... ... ပြီးတော့
ရွာချပစ်လိုက်ချင်တယ် ... ... ... ... ...
ကျွန်တော့်ဘ၀က ကြွေကျလိုက်ဖို့ အသင့် ... ... ...
ရွာနေတဲ့ မိုးဖွဲလေးရယ် ...
မစိုပါစေနဲ့ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ။
ခေါင်းစဉ် - တောင်ငူမြို့ကဘုရားများ
ဒါကတော့ မြတ်စောညီနောင် ဘုရားပုံတွေပါ ထပ်တင်ပေးပါဦးမယ် ........... ထပ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်
တကယ်ဆိုရင် တစ်ခွန်းလောက်တော့ နှုတ်ဆက်ခဲ့ဖို့ကောင်းတာပေါ့
အခုတော့ . . .
မိကျောင်းသား ငါ့ အမှားတွေပါပဲ
"ဘာများ ငါ မှားလို့လဲ"
မင်းနဲ့ငါကွဲခဲ့တာ သင်္ကြန်တောင် (၈)ခုတိုင်ခဲ့ပြီပဲ
ဒါပေမယ့် . . .
ငါ့ ဦးနှောက်က မင်းကိုငြင်းဆန်နေပေမယ့်
ငါ့ နှလုံးသားကတော့ မင်းပြန်လာမယ့်လမ်းကိုပဲ
မျှော်ကြည့်နေဆဲပါ . . .
ချစ်နေရတာထက် စာရင် လွမ်းနေရတာက ပိုကောင်းပါတယ်
မင်းနဲ့ငါ စိတ်ကူးတွေထဲမှာ တွေ့နေကြတာပဲလေ
ငါ အမြဲတမ်းခွင့်လွှတ်နေပါရစေ. . .
်သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့ရင်တွေဟာ ပြန်လည်စိုစွတ်လာတယ်။ တစ်ချိန်က ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာ ပိတောက်ပင်လေးတစ်ပင် ပျိုးခဲ့ဖူးတယ်....။ ကျွန်တော် ကိုယ်တိုင် တယုတယနဲ့ပေါ့....။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိတောက်လေးဟာ
အ၀ါရောင်နှုတ်ခမ်းပါးလေးတွေနဲ့ တစ်ကိုယ်လုံး ၀ါထိန်လန်းဆန်းလို့....။ ကျွန်တော့် ရဲ့ ပိတောက်လေးဟာ သင်္ကြန်တစ်ခေတ်လုံးကို ၀ါထိန်စေခဲ့တာပါ.....။ ကျွန်တော့် ကို ထင်ဟပ်တဲ့ ပိတောက်ရဲ့သွေးတွေက အ၀ါရောင်၊ ကျွန်တော့် ကိုယ်ထဲမှာ စီးဆင်းနေတဲ့ သွေးတွေကလည်း အ၀ါရောင်....၊ ကျွန်တော်နဲ့ပိတောက် အများ တကာ မနာလိုလောက်အောင် လူ့ယဉ်ကျေးမှုတွေထဲ အတူ ဖြတ်သန်းခဲ့ကြတယ်။
ပိတောက်က ပိတောက်ပန်းလေးပန်ထားတဲ့နေ့က ကျွန်တော့် တစ်ကိုယ်လုံး ပိတောက်ရနံ့တွေနဲ့ ထုံသင်းမွှေးကြိုင်လန်းဆန်းခဲ့ဖူးတယ်....။ကျွန်တော်နဲ့ ပိတောက် သင်္ကြန်မိုးဖွဲလေးတွေအောက်မှာ ပိတောက်ပန်းတွေ ဖူးဝေခဲ့ဖူးတယ်...။
ကျွန်တော့် အခန်းကျဉ်းလေးထဲမှာ မိုးလေမလုံတဲ့ ကျွန်တော့် ကဗျာစာအုပ်တွေရယ်၊
နေ့စဉ်ဖျားနာနေကျ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒိုင်ယာရီလေးရယ်၊ ပိတောက်အတွက် ဂစ်တာ လေးတစ်လက်ရယ်၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် နစ်မြှပ်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပိတောက်ရဲ့ ပန်းချီကားလေးရယ်နဲ့ အခန်းလေးက ပိတ်လှောင်မွန်းကြပ်လို့ ... ... ... ။
ကျွန်တော့်ကတော့ သေချာမှုတွေအထပ်ထပ်နဲ့ ပိတောက်ကို ချစ်ခဲ့တာပါ...။
ကျွန်တော်နဲ့ ပိတောက် တစ်မိုးအောက်ထဲမှာ နံနက်စာအတူစားနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားခဲ့တယ်...။ ဒါပေမယ့် အရာရာဟာ အိပ်မက်တစ်ခုလိုပဲ နံနက်ခင်းတွေကြား မှာ မှုန်ရီဝိုးတစ်ဝါးနဲ့ လမ်းပျောက်ခဲ့တယ်...။ အခန်းတံခါးကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ပိတောက်ရနံ့က ရင်ကိုလာဆောင့်တယ်...။ အဲဒီတစ်လော ပိတောက် တွေတွေငေး ငေးလေး ဖြစ်တက်လာတယ်....။ ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ကို တွန်းဖယ်တက်လာတယ်...။
ကျွန်တော် လိုက်မမှီနိုင်လောက်တဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်ကားအသစ်တွေအကြောင်း ပြောတက်လာတယ်...။ ကျွန်တော်နဲ့ အတူမကြည့်ဖူးတဲ့ ရုပ်ရှင်ကားအသစ်တွေ အကြောင်းပြောတက်လာတယ်...။ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ ညနေတွေက တစ်ချိန်ကလို စည်ကားမှုမရှိလာတော့ဘူး...။ ကျွန်တော်က ချစ်ခြင်း မေတ္တာအကြောင်း ပြောပြတယ်၊ ပိတောက်က ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်အကြောင်း ပြန်ပြောပြတက်လာတယ်...။ ကျွန်တော်က ကျွန်တော့်ရင်ထဲက ပိတောက်ပန်းလေး အကြောင်း ပြောပြတယ်၊ ပိတောက်က ပုံတူမျိုးပွားနည်းအကြောင်း ပြန်ပြောပြတက် လာတယ်...။ ကျွန်တော်က မာသာထရီဆာအကြောင်း ပြောပြတယ်၊ ပိတောက်က ဟစ်တလာအကြောင်း ပြန်ပြောပြတက်လာတယ်...။ လေပြည်တစ်ချက် တိုက်ခတ် လိုက်ရုံနဲ့ ကြွေကျလိုက်ဖို့ သတ္တိတွေ ပိတောက်မှာ ရှိတက်လာတယ်....။ ကျွန်တော့် ရဲ့ လိုအပ်ချက်က ပိတောက်ဖြစ်ပြီး ပိတောက်ရဲ့ လိုအပ်ချက်က ကျွန်တော် မဖြစ်ခဲ့ တော့ဘူး....။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အခန်းလေးကို မခေါက်ဘဲနဲ့ ပိတောက်က ကျွန်တော့် ဘ၀နဲ့ အဝေးကို တိတ်တိတ်လေး ထွက်သွားခဲ့တယ်...။ နွေက ပူလောင်လှရဲ့...။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ညတွေဟာ လင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်နဲ့ ပိတောက်တစ္ဆေ ခြောက်လှန့် နေပြီ...။ သူထွက်သွားတယ်၊ ကျွန်တော် ကျန်ခဲ့တယ်...။ ကျွန်တော့်ဘ၀ရဲ့ အဝေး ကို သူထွက်သွားတယ်....။ ကျန်တော် ကျန်ခဲ့တယ်၊ သူနဲ့ကျွန်တော် ပါသွားသလား၊
ကျွန်တော်ဆီမှာ သူကျန်ခဲ့တယ်၊ သူ့ဆီမှာတော့ ... ... ... ... ... ... ... ။
ကျွန်တော်မသိလိုက်တဲ့ မုန်တိုင်းတွေက ကျွန်တော့်ရဲ့ပိတောက်ရနံ့လေးကို ယူသွား ခဲ့တယ်...။ ဟုတ်ကဲ့...ကျွန်တော်က အခုတော့ ပိတောက်ပင်ကြီးကိုမှီပြီး ပိတောက် ပန်လေးတစ်ပွင့်ကို လွမ်းနေတာပါ...။ သူထွက်သွားတယ်....၊ ကျွန်တော့် ကမ္ဘာနဲ့ အဝေးကို....။ အဲဒီနေ့က ပိတောက်က ပိတောက်ပန်းလေး ပန်ထားတယ်... ... ... ။
တောင်ငူပုံတွေကိုတင်ပါ့မယ်။ အခုလိုပုံတွေ စုဆောင်းရိုက်ကူးထားတဲ့အတွက် ကိုတရုတ်ကြီးကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အပေါ်ကပုံနှစ်ပုံကတော့ တောင်ငူမြို့မှကြိုဆိုနေတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းပေါ်မှ မန္တလေးဘက်မှအလာ တောင်ငူမြို့အ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ မြို့ကိုဝင်ပါပြီ ...... (မန္တလေးဘက်မှ အလာမြင်ကွင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်)
ခေါင်းစဉ် - Taungoo, ဓါတ်ပုံများ
၂၀၀၃ ဒီဇင်ဘာမှစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ဂီတမိတ် သင်တန်းကျောင်းမှာ စန္ဒရား၊
အဆိုဂစ်တာ (Classic, Bass)၊ ဒရမ်၊ ကလဲနက်၊ လေမှုတ်တူရိယာစတဲ့ ဂီတ
ပညာရပ်များကို သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ ကြိုက်နှစ်သက် ရာမေဂျာတစ်ခုခုကို
သင်ကြားတဲ့အခါတိုင်းမှာ ဂီတ သီအိုရီနဲ့ အဆိုပိုင်းကို
တွဲဖက်သင်ကြားပေးပါတယ်။ ဂီတပညာရှင် ဆရာဆယ့်ခြောက်ဦးက တပည့်တစ်ဦး လျှင်
ဆရာတစ်ဦးစနစ်နဲ့သင်ကြားပေးပါတယ်။ တစ်ပတ်လျှင် နှစ်ရက်နှုန်းနဲ့တစ်လကို
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်- ၂၁၉၊ ကာယသုခလမ်းသွယ်၊ ကံဘဲဘူတာရုံလမ်း၊ ရန်ကင်း၊ Ph: ၁၉ ၅၁၈၁၇၁၄
၁၉၉၄ကနေ စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့ ညီညီထွေးရဲ့ ဂစ်တာသင်တန်းမှာ
ဂစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခြေခံ ကနေစပြီး သင်ပေးသလို၊ လာရောက်သင်ကြားလိုသူရဲ့
ဆန္ဒအတိုင်းမေးမြန်းသင်ကြားပေးပါတယ်။ ဂစ်တာ ဆိုင်ရာ လက်လေ့ကျင့်ခန်း
ဂီတပိုင်းဆိုင်ရာ သီအိုရီ များကိုလည်း သင်ကြားပေးပါတယ်။ ယခုအခါ
ဂစ်တာသင်တန်းအပြင် ဒရမ်သင်တန်းကိုပါ ပူးတွဲဖွင့်လှစ်ထားပါတယ်။ Rock
ဂီတကို ခုံမင်သူများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့်သင်တန်းပါ။
ညီညီထွေးရဲ့ဂစ်တာသင်တန်းမှာ ဂစ်တာတီးခတ်ရုံမျှမက ဂစ်တာ Effect
တွေရဲ့သဘောထား၊ နိုင်ငံတကာက အတီးသမားတွေ ရဲ့ အယူအဆ စတာတွေကိုပါ
ပြောပြဆွေးနွေးပေးပါတယ်။ သင်တန်းပုံစံမျိုးမဟုတ်ဘဲ မိသားစုဆန်ဆန်
သင်ကြားပေးခြင်းပါ။ သင်တန်းကြေးအနေနဲ့ကတော့ တစ်လကို တစ်ပတ်လျှင်(၂)ရက်
သင်ကြားချိန် တစ်နာရီခွဲနှုန်းကို တစ်သောင်း၊ တစ်ပတ်လျှင်(၃)ရက်
သင်ကြားချိန် တစ်နာရီခွဲကို တစ်သောင်းခွဲနှုန်းနဲ့ သင် ကြားပေးနေပါတယ်။
ဒရမ်သင်တန်းကတော့ နှစ်နာရီသင်ကြား ချိန်ကိုတစ်သောင်းခွဲနှုန်းပါ။ ဖော်ပြပါ
သင်တန်းအချိန် များမှာ သင်ကြားမှုအချိန်ဖြစ်ပြီး လာရောက်လေ့ကျင့်
လိုတဲ့သင်တန်းသားများအား အချိန်ညှိနှိုင်းပြီးလာ ရောက်လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်-၁၅၂(B)၊ (၈)လွှာ၊ မြန်မာ့ ဂုဏ်ရည်လမ်း၊ ကန်တော်လေး Ph -
တယောသင်တန်း (ဦးတင်ရီ) Academy of Music
တယောပညာရှင် ဦးတင်ရီ ကိုယ်တိုင်ဦးစီးဖွင့် လှစ်ထားတဲ့
သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှစ်နှစ် အရွယ်ကနေ စတင်သင်ကြားနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်း
ကြေးအနေနဲ့ကတော့တစ်လလျှင် တစ်သောင်း နှုန်းတစ်ပတ်(၃)ရက်၊ တနင်္လာ၊ ဗုဒ္ဓဟူး၊
သောကြာ (၉)နာရီမှ (၁၁)နာရီထိ၊ ညနေ(၄)နာရီမှ (၆) နာရီအထိ
ကြိုက်နှစ်သက်ရာအချိန်များ ရွေးချယ် တက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်(၃၅)၊ (၆)လွှာ(B)၊ ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်း၊ လှည်းတန်း၊
ကမာရွတ်မြို့နယ်။ Ph: ၀၉ ၉၉၂၈၈၅၃
Hla Shwe Music Center
စန္ဒယားနဲ့ပတ်သက်သမျှတွေဖြစ်တဲ့ စန္ဒယား ရောင်းဝယ်ခြင်း၊
ငှားရမ်းပြုပြင်ခြင်းတို့အပြင် စန္ဒယား၊ ဂစ်တာ၊ တယော သင်တန်းများကိုလည်း
ဖွင့်လှစ် ထားတဲ့ လှရွှေ Music Center မှာ တက်မယ်ဆိုရင် သင်တန်းကြေးအနေနဲ့
တစ်လလျှင် စန္ဒယား သင်တန်းကို (၂)သောင်းခွဲနှုန်း တစ်ပတ်(၂)ရက်၊ ဂစ်
တာသင်တန်းကို အခြေခံ (၂) လခွဲအပြတ်၊ (၂) သောင်း ခွဲနှုန်း၊ တယောသင်တန်းကို
အခြေခံ (၂) လခွဲအပြတ် သုံးသောင်းနှုန်းနဲ့ နေ့စဉ်မနက်(၉)နာရီမှ ညနေ(၇)နာ
ဆက်သွယ်ရန်- ၉၀၉(B)၊ (၉)လွှာ၊ ရွှေဂုံတိုင်၊ ယုဇန တာဝါ။ PH: ၅၅၉၅၈၉
ကိုစိုင်း ရဲ့ ဂစ်တာသင်တန်း
ဂစ်တာစာအုပ်တွေလည်းထုတ် ဂစ်တာနဲ့ပတ်သက်ရာ နည်းပညာဆောင်းပါးတွေလည်းရေးတဲ့
ဂစ်တာပညာရှင် ကိုစိုင်းကိုယ်တိုင် (၁၉၉၄) ကနေ စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့
သင်တန်းပါ။ သင်တန်းမှာ မသင်မနေရ သီဆိုရီပိုင်းနဲ့ Rhythm
တီးခတ်ခြင်းကိုသင်ပေးပြီး Metal, Bass, Lead စတာတွေကို သင်ကြားလိုတာကို
သင်ယူနိုင်ပါတယ်။ သင်တန်းချိန်ကို မနက်၊ နေ့လည်၊ ညပိုင်းဆိုပြီး
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ တစ်ချိန်ကို တစ်နာရီနှုန်းနဲ့ တစ်ပတ်3ရက်
သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ သင်တန်းကြေးက တစ်လကို တစ်သောင်းနှုန်းပါ။
ဆက်သွယ်ရန်- အမှတ်(၆၈)၊ မင်းလမ်း စမ်းချောင်း၊
စားရိတ်နည်းနည်း အသုံးတည့်နည်းများ (5 )
စားရိတ်နည်းနည်း အသုံးတည့်နည်းလည်းများ (5 )
ကျွန်တော် ဒီ စားရိတ်နဲနဲ အသုံးတည့်နည်းလမ်းများကို
မတင်တာတော်တော်ကြာသွားပါပြီ။ ဟိုတစ်နေ့က သူငယ်ချင်းမလေးတစ်ယောက်က
ကျွန်တော်ကူးကူးနေတဲ့ စင်္ကာပူက woman မဂ္ဂဇင်းကလဲ မရတော့တာနဲ့ မြင်ကွင်း
မဂ္ဂဇင်း ( ဖေဖော်ဝါရီ) ထဲကပဲ ကျွန်တော် ပြန်တင်ပြလိုက်ပါတယ်...။
ကြက်သွန်ဖြူတွေ အခွံသင်ထားတာများသွားတယ်။ ဟင်းချက်ဖို့ကနဲနဲ ၊
ပိုနေတာကများများ ဖြစ်နေရင် နွမ်းမသွားအောင်သိမ်းတဲ့နည်းပြေ
ပုလင်းလွတ် တစ်လုံးသန့်သန့်မှာ သံလွင်ဆီနဲနဲထည့်ပြီး ကြက်သွန်ဖြူ
အခွံသင်ထားတဲ့ အမွှာတွေ ပုလင်းထဲထည့်ကာ ရေခဲသေတ္တာမှာ ထည့်လိုက်ရုံပါပဲ။
နောက်တစ်ခါဟင်းချက်တော့မှ ပုလင်းထဲက ကြက်သွန်ဖြူ တွေထုတ်ယူတဲ့အခါ
အိပ်ရာခင်းတွေ အသစ်လဲတဲ့အခါ ပါလာတဲ့အိပ်ရာခင်းထည့် ပလပ်စတစ်အိပ်ကို
မပစ်လိုက်ပဲ ဖိနပ်ဟောင်း ၊ ပစ္စည်းဟောင်းတွေ ထည့်သိမ်းစရာလုပ်ပါ။
ပစ္စည်းဟောင်းတွေ ဖုန်မတက် ၊ မှိုမတက်ပဲ သိမ်းနိုင်တဲ့အပြင် အဲဒီအိတ်က
တစ်ထောင့်တစ်နေရာမှာ ထားသိုလို့ရတော့ ပစ္စည်းတွေ တစ်စုတစ်စည်း လိုရင်
ရေခဲမုန့် အရည်ပျော်တာ ကာကွယ်နည်း
ဖော့ခွက်ကလေးနဲ့ ရေခဲမုန့်အလုံးလေးတွေစားတဲ့အခါ ရေခဲမုန့်ကအရည်ပျော်ပြီး
ဒီလိုမဖြစ်အောင်ကာကွယ်ချင်ရင် စားစရာ marshmallow ထဲက အတုံးလေးတွေကို
ဖော့ခွက်အောက်မှာခံပြီးတော့ ရေခဲ့မုန့်တွေကို အပေါ်ကတင်ပြီးမှစားပါ။
ဒါဆိုရင် ဖော့ခွက် တွေပျော့တာကာကွယ်ပြီးသား ဖြစ်နေတဲ့အပြင် နောက်ဆုံးမှာ
marshmallow လေးတွေကို ထုတ်စားတဲ့အခါ အရသာချိုချိုလေးတွေ စုပ်ယူဖို့
ပစ္စည်းတွေ ဖုန်တက် ဖုန်တင်တဲ့အခါ ရှင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းကတော့
အမျိုးစုံပါပဲ။ အခုလဲ ဖုန်ရှင်းတဲ့ ပစ္စည်းလေးတစ်မျိုးကို
ဆယ်လိုတိပ်အကြည့်နဲ့ ကော်ပါတဲ့ဘက်ကိုအပြင်ကထားပြီး တစ်ပက်ပြည့်အောင်
တင်းတင်းပက်ပါ။ အဲဒီပစ္စည်းနဲ့ ဖုန်ကပ်နေတဲ့ စားပွဲကုလားထိုင်
မျက်နှာပြင်ကို လျှောက်လိမ့်ရင် ဖုန်တွေကပ်ပါလာလိမ့်မယ်။ လွယ်ကူသက်သာတဲ့
ဘယ်သူတွေက ဘာတွေလုပ်နေလို့၊ ဘယ်သူတွေက ဘယ်တွေသွားကြမှာတုန်း...................
“သင်္ကြန်ရောက်တော့မယ်”ခေါင်းစဉ်ဘေးက ဂဏန်းလေးတွေရေးထားတဲ့ dialog box လေးထဲက ဂဏန်းလေးကိုနှိပ်ပြီး အကြံလေးတွေရေးသွားပါဦး...
ခေါင်းစဉ် - အသံလေးတွေကြားချင်တယ်
လောကိသားများအတွက် အစွမ်းထက် ဆေးတစ်ခွက်
အို အဆွေတို့ ...
ကျွန်ုပ်သည် အလွန်တရာ အစွမ်းထက်လှသော ဆေးကောင်း တစ်လက်ကို ကျွန်ုပ်၏ ဆရာထံမှ သင်ယူရရှိထား၏။
ဤဆေးညွှန်း ကိုနောင်လာနောင်သားတို့ အကျိုးငှာ ဤ Blog တွင် မှတ်တမ်းတင်အပ်ပေ၏။
၁။ မည်သည့်အချိန်၊ မည်သည့်နေရာ၊ မည်သည့်အကြောင်းကိစ္စ မဆို သင့် ကိုယ်သင်ယုံကြည်မှု ရှိစေခြင်း။
၂။ သူတကာတို့၏ ချစ်ခင်လေးစားမှု ရရှိစေခြင်း။
၃။ ရုပ်ရည်ရူပကာ တင့်တယ်ကြည်လင်စေခြင်း။
၄။ လုပ်ငန်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့စေခြင်း။
၅။ ကိုယ်ခန္ဓာ မွှေးပျံ့သန့်ရှင်းစေခြင်း။
၆။ စိတ်နှလုံး ချမ်းမြေ့ရွှင်လန်းစေခြင်း။
၇။ ရန်သူအပေါင်း၏ နှောက်ယှက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးစေခြင်း။
၈။ ကောင်းမွန်တင့်တယ်စွာ နေထိုင်ရခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် အကျိုးကျေးဇူးများရရှိပါမည်။
- နံနက် အိပ်ရာထ
- မွန်းတည့် ထမင်းစားပြီး
- အချိန်ရှိသရွေ့ သုံးဆောင်ရမည်။
- ပါဏာတိပါတာ ဝေရမဏိ (သူတစ်ပါး အသက်ကို သက်ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
- အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိ (သူတစ်ပါး ဥစ္စာကို ခိုးယူခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
- မုသာဝါဒါ ဝေရမဏိ (လိမ်လည် သော၊ ပြိန်ဖျင်းသော၊ ကြမ်းတမ်းသော၊ ကုန်းတိုက် မိတ်ခွဲသော စကားများ ပြောခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
- ကာမေသုမိစ္ဆာစာရာ ဝေရာမဏိ (သူတစ်ပါး အိမ်ရာ ပြစ်မှားခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
- သုရာမေရယမဇ္ဇပမာဒဋ္ဌာနာ ဝေရမဏိ (မူးယစ်၊ ထုံထိုင်း စေတတ်သော အရာများကို သောက်စား သုံးစွဲခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ခြင်း)
ဆေးအမည် - "ပဉ္စသီလ"
ထိုဆေးကို ညွှန်ပြပေးသော ဆရာ ဂေါတမ ဗုဒ္ဓ၊ တရားတော် နှင့် သံဃာတော် တို့အား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဤဆေးကို လူမျိုးမရွေး ဘာသာမရွေး မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို စတင်သုံးဆောင်နိုင်ပါသည်။
သူမကို မှတ်မှတ်ထင်ထင်တွေ့လိုက်ရတယ် ......သန်လျင်တံတားပေါ်က ဖရိန်တန်းတွေလိုလို ကွေးကွေးလေးနဲ့ စင်းနေတဲ့ သူမရဲ့ မျက်ခုံးတစ်ရှည်.....
စက်မှု(၁)က ထုတ်တဲ့ ကြွေရည်သုတ် လင်ပန်းတွေလို ၀ိုင်းစက်ကျယ်ပြန့်တဲ့မျက်ဝန်းတစ်စုံ......
တစ်မြန်နေ့က ကျန်တဲ့ အီကြာကွေးကိုနှစ်ပြန်ကြော်ထားသလို မာတင်းတင်းနှုတ်ခမ်းနှစ်လွှာရယ်......ပြီးတော့...
ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲထဲက ချန်ဂင်လို ဂါဝင်ကြီးနဲ့........
အဲဒါတွေအားလုံး ရင်ထဲကို အကုန်ရောက်သွားရော.....မျက်လုံးအစုံက တင်ပဆုံ....အဲလေ...
မျက်လုံးအစုံက တစ်ဆင့် ဒီရင်အစုံသို့ ကြင်ရုံကလေးနဲ......ရင်ခုန်သံတွေက ပလုံစီသွားရောပေါ့....
SHE IS FROM HEADMISTRESS OF UCST. HEHE :p( PYAN MA TINE PYAW KYA PAR NAE NAW)
ချစ်သူ့ အနမ်းနဲ့ပဲ ငြိမ်းသက်နိုင်မယ်လို့ ။
ခေါင်းစဉ် - ကဗျာ, စပ်မိစပ်ရာ